Apple nwere ike gbanwee batrị ka njọ ọrụ ha | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị iPhone Plus, ị nwere ike iche na amata ya na aha ndetu a, na bụ na obodo kwụụrụ nke ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ Cupertino, ọbụlagodi nke kachasị ọhụrụ dị ka iPhone 7 na iPhone 8, na-enye ọnụ ọgụgụ nnwere onwe nke na-anaghị ahapụ onye afọ ojuju.
Otu akụkọ ritere ọhụrụ banyere arụmọrụ ka mma na batrị na-abanye uhie uhiet, na enwere otutu ndi oru eji egosi na o bu ihe mere eme. Ka anyị hụ ntakịrị ihe nsogbu dị na batrị iPhone ma ọ bụrụ na edozi ya n'ezie na nnọchi na-akwadoghị.
Isi akụkọ na-akọ bụ eziokwu na ụfọdụ ekwentị dị ka iPhone 6 ma ọ bụ iPhone 6s na-enwe nsonaazụ dị iche na Benchmarks. dabere na batrị dochie, ndị ọrụ a na-arụ ụka na batrị ọhụrụ na iPhone ha na-arụpụta nsonaazụ yana arụmọrụ zuru oke nke ekwentị. Na agbanyeghị nke a, ọ bụghị oge mbụ anyị hụrụ “mmetụta placebo” n'ụdị omume a, yabụ anyị kwesịrị iji ozi tweezers mara mma were ozi ahụ.
O doro anya na, usoro nhazi usoro ihe omume iji nye nsonaazụ kacha mma bụ ihe na-eme ka ekwentị dị nwayọ mgbe ụfọdụ. Nke ukwuu nke mere na ndị na-amalite itinye batrị ndị a achọpụta na arụmọrụ ka mma. Ọ bụ ihe dịka ma ọ bụrụ na arụ ọrụ nchekwa nchekwa na-arụ ọrụ mgbe niile. O sina dị, Nke a na - ere ọkụ ọkụ Apple nwere ike ịmanye arụmọrụ ka njọ na ekwentị ya ochie, ọrụ afọ ofufo nke ga-etinye ndị ọrụ gburugburu ụwa n'ọnọdụ ọjọọ. Ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ozi mbụ na nke a, obodo teknụzụ nwere anya na ya ma anyị ga-emelite ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Apple nwere ike gbanwee batrị iji mebie arụmọrụ ha
Apple gosiputara nnweta Shazam, ijeoma nke nnukwu